Ukuba Umbuki Zindwendwe wakho uyakurhoxisa ukubhukisha kwakho, uza kusoloko uyibuyiselwa yonke imali yakho, ubuyiselwe neemali ezimele zibhatalwe kunye neerhafu. Unako ukuthumela okanye ufumane imali Kwiziko Lezimali.
Ngaba ufuna uncedo olungakumbi?
Ukuba umbuki zindwendwe wakho akakwazi ukukunceda, unokufanelekela ukubuyiselwa yonke imali yakho phantsi Kwepolisi Engokubuyiselwa Kwemali Yondwendwe ukuba unxibelelana noAirbnb zingekapheli iiyure eziyi-24 uyibonile ingxaki. Fumanisa ukuba ingxaki yakho iqukiwe na.
Kufuneka ndenze ntoni ukuba indawo endihlala kuyo ayicocekanga xa ndifika?
Ukuba ufumanisa ukuba indawo oza kuhlala kuyo ayicocekanga xa ufika, kubalulekile ukuba ufune uncedo zingekapheli iiyure eziyi-24 emva kokub…